Ukuguqulwa kweMfazwe okanye iMpendulo yokuPhupha
Injongo yalo naluphi na isidalwa esiphilayo esikuphilileyo ukuqinisekisa ukunyuka kweentlobo zayo kwizizukulwana ezizayo. Yingakho abantu bezala. Injongo yonke kukuqinisekisa ukuba iindidi ziqhubeka ixesha elide emva kokuba umntu efile. Ukuba loo galethi ethile yomntu ingadluliselwa kwaye iphile kwizizukulwana ezizayo, oko kungcono kumntu lowo. Oko kuthethwa, kunengqiqo ukuba, ngokugqithiseleyo kwexesha, iintlobo ziye zatshintsha iindlela ezahlukeneyo ezikunceda ukuqinisekisa ukuba umntu uya kuphila ixesha elide ukwenzela ukuba avelise kwaye adlulise amajethi ayo kwintlobo enokukunceda ukuqinisekisa ukuba iindidi ziyaqhubeka iminyaka kuza.
Izinto ezisisiseko zokuphila ezisemgangathweni zinexesha elide kakhulu lokuziphendukela kwemvelo kwaye ezininzi zigcinwa phakathi kweentlobo. Enye yeso sikhala yinto ebizwa ngokuba "ukulwa okanye indiza". Le ndlela iguquke njengendlela yokuba izilwanyana zikwazi ukuba nayiphi na ingozi ngokukhawuleza kwaye zenze ngendlela enokuthi ziqinisekise ukuba zisinda. Ngokwenene, umzimba uphantsi kwinqanaba lezinga eliphezulu lokwenziwa komsebenzi ngokugqithiseleyo kunezinto eziqhelekileyo kunye nokuqapha okukhulu. Kukho utshintsho olwenzekayo ngaphakathi kwesigxina somzimba esivumela ukuba isilwanyana sibe silungele ukuhlala kwaye "silwe" ingozi okanye sibalekele "kwi-flight" kwisoyiko.
Ngoko ke, yintoni, i-biologically, eyenzeka ngokwenene kwisilwanyana semfuyo xa i-response "yokulwa okanye indiza" imisiwe? Inxalenye yenkqubo ye- nervous autonomic ebizwa ngokuba ulwahlulo olunesihawu olulawula le mpendulo. Inkqubo ye-nervousic nerveous is part of the system of nervous controls all processes without consciousness that happens in the body.
Oku kuya kubandakanya yonke into ekukugaya ukutya kwakho ukugcina igazi lakho ligeleza ukulawula amahomoni ahamba kwiintlanzi zakho ukuya kwii-cell target target. Kukho iinkalo ezintathu eziphambili ze-system ye-nervous system. Ulwahlulo oluthathekayo lugxininisa "ukuphumla kunye nokugaya" iimpendulo ezenzekayo xa uphumla.
Ulwahlulo lwentsimbi ye-system ye-nerveous autonomic ilawula ezininzi iingcamango zakho. Ulwahlulo olunesihawu luyinto ekhawuleza ngayo xa uxinzelelo olukhulu, njengengozi esengozini, lukhona kwindawo yakho.
I-hormone ebizwa ngokuba yi-adrenaline yintloko echaphazelekayo kwimpendulo "yokulwa okanye indiza". I-Adrenaline ifihliwe kwiingqungquthela phezu kweentso zakho ezibizwa ngokuba yi-adrenal glands. Ezinye izinto i-adrenaline yenzayo emzimbeni womntu ziquka ukwenza izinga lentliziyo kunye nokuphefumula ngokukhawuleza, ukuqinisa iingqondo ezifana nokubona nokuva, kwaye ngamanye amaxesha kukhuthaza izigulane zokujuluka. Oku kulungelelanisa isilwanyana kwisiphi na impendulo, nokuba uhlala kwaye ulwe nengozi okanye ubaleke ngokukhawuleza, nguye ofanelekileyo kwiimeko ezizifumanayo.
Iingcali zezinto eziphilayo zikholelwa ukuba ukuphendula "ukulwa okanye ukundiza" kwakubalulekile ekusindeni kweentlobo kwixesha leGeologic Time . Izinto ezininzi zendalo zazicingelwa ukuba zinolu hlobo lwempendulo, nangona bebengenakho ubunzima obuyinkimbinkimbi kangangokuba ezininzi iintlobo zinamhlanje. Izilwanyana ezininzi zasendle zisasebenzisa le ntshukumo imihla ngemihla ukuze zenze ubomi babo. Ngakolunye uhlangothi, abantu baye baphumelela kwaye basebenzisa lesi siko ngendlela eyahlukileyo kwimihla ngemihla.
Iingxaki zemihla ngemihla ezibalulekileyo zokulwa okanye ukubalekela
Inkxalabo, kubantu abaninzi, ithathe inkcazo eyahlukileyo kwixesha lanamhlanje kunokuba ithetha ntoni kwisilwanyana esilinga ukusinda kwintlango. Ukuxinezeleka kwethu kuhlobene nemisebenzi yethu, ubudlelwane, kunye nempilo (okanye ukungabi naso). Sisasebenzisa impendulo yethu "yokulwa okanye indiza," ngendlela ehlukile. Ngokomzekelo, ukuba unentetho enkulu ekunikezeni emsebenzini, mhlawumbi uya kuba yiloo nto unokuyichaza njengentlonelo. Ulwahlulo lwakho lovelwano lwenkqubo yakho ye-nervous autonomic iye yangena kuyo kwaye unokuba neentlanzi, ixabiso lentliziyo ngokukhawuleza, kunye nokuphefumla okungapheliyo. Ngethemba, kwimeko apho, uya kuhlala kwaye "ulwe" kwaye ungaphenduli kwaye uphume ngaphandle kwegumbi.
Ngexesha elide, unokuva ibali leendaba malunga nendlela umama aphakamisa ngayo into enzima, enzima, njengemoto, emntwaneni wayo.
Lo ngumzekelo wempendulo "yokulwa okanye yendiza". Amajoni emfazwe aya kuba nokusetyenziswa komsebenzi wokuqala "wokulwa okanye ukundiza" njengoko bezama ukusinda kwiimeko ezilolo hlobo.
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ze-Iowa
Iimpawu zoGuqulelo eziHlangeneyo kunye noViwo-mfundiso
I-Deutomist Theology kunye nokugxeka amaxhoba
Ukukhipha Isisu Kubulawe? Isizathu sokuba Kutheni
I-Funniest Memes Ukuphendula ngokuvuma kwePalin
I-5 e-Top Conservative States e-US